မြန်မာကိုကမ္ဘာသိအောင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့သူ ကြီးမြတ်သောငြိမ်းချမ်းရေး ကမ္ဘာသိခေါင်းဆောင်ကြီးမှာ ဦးသန့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ၁၉၈၈နောက်ပိုင်းမှ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာသည်။ မည်သို့ဖြစ်ပါစေ ဦးသန့်အောက်မေ့ဘွယ်များကို မြန်မာနိုင်ငံသားများကသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ နောင်လာနောင်သား မြန်မာမျိုးဆက်သစ်အတွက်
၁။ ဦးသန့်သည် ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်။
၂။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ အမြင့်ဆုံးသောရာထူးကို ၁၀နှစ်တိုင်ရွေးချယ်ခံရသူ။
၃။ ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မြို့ငယ်လေးမှ ပညာတတ်ဘွဲ့ရ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးတာဝန်ထမ်းခဲ့သူ၊
၄။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုတို့နှင့်တန်းတူ ကြိုးပမ်းခဲ့သူ၊
၅။ လွတ်လပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင့်မြင့်အတွင်းဝန် (ဝန်ကြီးရာထူး) တာဝန်ထမ်းခဲ့သူ၊
၆။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတွင် သံတမန်ဘဝမှ အမြင့်ဆုံးရာထူးထိအောင် ကြိုးစားခဲ့သူ၊
သူ၏ပညာဥာဏ်ကြီးမားလှပုံ၊ အတွေးခေါ်မြင့်မားပုံ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်မှုများမှာ ယခုခေတ်မြန်မာများသာမက ကမ္ဘာ့လူထုအားလုံး စံပြနမူနာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်မည့် အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်စေခဲ့သူ၊ ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်းကို ၁၉၆၀ခုနှစ်လွန်ကာလ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး အမေရိကန်နှင့်ဆိုဗီယက်ရုရှား တို့ကြားမှာ လွန်းပျံယာဉ်သဖွယ် စွမ်းစွမ်းတမန်လုပ်ဆောင်မှုများမှာ အံ့သြဘွယ်ဒဏ္ဍာရီသဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုမြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် အမှတ်ရစရာများ ပြန်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ဦးသန့်၏မြေးဖြစ်သူ ဦးသန့်မြင့်ဦး (ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦး ပီအိတ်ဒီ)2 သည် ကမ္ဘာ့ကျော် သမိုင်းပညာရှင်အဖြစ် ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်များစွာရေးသား ထုတ်ဝေပြီး၊ ဦးသန့်မျိုးဆက်ကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့သည်။ ဦးသန့်မြင့်ဦး မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီး မြန်မာပြည်မှ ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကို ဖော်ထုတ်သည့် ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (ရန်ကုန်ဟာရီတိတ်ထရပ်ခ်ျ1) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပါဝင်လှုဒါန်း မေးမြန်းလိုသူများ အဖွဲ့အစည်းများ ၀၁ ၂၄၀၅၄၄ သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဦးသန့်မွေးရပ်မြေ ပန်းတနော်တွင် ဦးသန့်နေအိမ်ဟောင်းကို ပြုပြင်မွမ်းမံကာ ပြတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပန်းတနော်တွင် ဦးသန့်စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ရန်အတွက် ဇွန်လ-၂၀၁၆ တွင် ပုသိမ်-ရန်ကုန် ကားလမ်းမကြီးဘေးတွင် ဆိုင်းဘုတ်ထူကာ စတင်စည်းရုံးလှို့ဆော်ခဲ့သည်။
ဦးသန့်အမှတ်တရ အုတ်ဂူနှင့်ဗိမာန်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော် တောင်ဖက်မုဒ်တွင် ၁၉၇၇ခု တည်ဆောက်ထားသည်။ ထိုနေရာကို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၊ မြန်မာကမ္ဘာများ လာရောက်လေ့လာဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဦးသန့်နေအိမ် (ပန်းဝါလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့) ကို နိုင်ငံတော်မှတာဝန်ယူပြီး ပြန်လည်မွမ်းမံသည်။ ဦးသန့်နေအိမ်ကို ထိမ်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တည်ထောင်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာနှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများ လာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာရန် တပါတ် (၃)ရက် - သောင်္ကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ဖွင့်လစ်ပေးသည်။ ထိုအိမ်တွင် စာကြည့်တိုက်နှင့် ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်လစ်ရန်အတွက် စေတနာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ အလှုရှင်များ ဦးသန့်နေအိမ်ရှိ အလှုခံပုန်းတွင် ထည့်ဝင်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ပါဝင်လှုဒါန်း မေးမြန်းလိုသူများ အဖွဲ့အစည်းများ ၀၉ ၉၆၀၉၉၇၂၁၅ သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စာအုပ်စာပေ၊ ဗွီဒီယိုများစွာ အမှတ်တရအဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ ထုတ်ဝေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးသန့် ၂၂-ဇန္နဝါရီ-၁၉၀၉ ပန်းတနော်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၂၅-နိုဝင်ဘာ-၁၉၇၄ အသက်၆၅နှစ်တွင် ကွယ်လွန်သည်။ ၁၉၆၁ မှ ၁၉၇၁ အထိ (၁၀)နှစ်တိုင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအကြီးဆုံးရာထူး အတွင်းရေးမှုချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား တော်လှန်ရန် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်နု တို့နှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပညာဆည်းပူးပြီး ပန်းတနော်မြို့တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဦးနုအစိုးရထိပ်တန်းရာထူးများ ထမ်းဆောင်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂသံတမန်အဖြစ် ခန့်ထားရာမှ သူ၏လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ရပ်များကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအကြီးဆုံးရာထူး အတွင်းရေးမှုချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။
ဦးသန့်ကို ထိုစဉ်က မြန်မာစစ်အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းက အသိမှတ်မပြုသလို ဦးသန့်ကလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရကို မနှစ်သက်ခဲ့။ ဦးသန့်သေဆုံးသောအခါ သူ၏ရုပ်ကလပ်ကို မြန်မာပြည်ပြန်သည်စဉ် ၁၉၇၄တွင် ဦးသန့်အရေးအခင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ရုပ်ကလပ်ကို သာမန်လူများ ကဲ့သို့မြှတ်နှံရန် ဦးနေဝင်းက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည။် ထိုစဉ်က ကြံထောသုသာန် (ယခု မင်္ဂလာကားအရောင်းအဝယ်ဈေး) တွင် မြှတ်နှံရန်စီစဉ်နေစဉ် ကျောင်းသားများက လွှဲပြောင်းရယူပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်မြှတ်နှံခဲ့သည်။ ယခု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ) အဝင်မုဒ်ဦးမှ မြေကွက်လပ်သည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးနှင့် ဦးသန့်ပထမအုတ်ဂူ ဖြစ်သည်။ ထိုအဆောက်အဦးကို စစ်အစိုးရက ပြင်းထန်စွာဗုံးခွဲဖြိုဖျက်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်ထိ မြေကွက်လပ်အဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့် ဦးသန့်အမှတ်တရ ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာမှ ဦးသန့်ရုပ်ကလပ်ကိုမူ စစ်အစိုးရက ယခုရှိနေသော ရွှေတိဂုံတောင်ဖက်မုဒ် ဗိမာန်အဖြစ် ဂူသွင်းမြှတ်နှံထားပါသည်။
ရွှေတိဂုံတောင်ဖက်မုဒ်ရှိ ဗိမာန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီး (၄)ဦးကို မြှတ်နှံထားသည့် အုတ်ဂူ(၄)ခု ရှိပါသည်။ နေ့စဉ် နံနက်၉နာရီမှ ညနေ၅နာရီအထိ မည်သူမဆို အခမဲ့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ထိုဝင်းခြံကြီးတွင် မြက်ခင်း၊ သစ်ပင်၊ ပန်းပင်များဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြေနေပါသည်။ ထိန်းသိမ်းမှု သာမန်မျှသာဖြစ်သောကြောင့် ရှည်လျားသော မြက်ပင်များလည်း စိမ်းလန်းစွာ ပေါက်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ပထမဆုံး အုတ်ဂူမှာ ဦးသန့်ဗိမာန်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦအပြင်ဖက်တွင် စာအုပ်၊ ဒေါင်းရုပ်၊ ဂျိူးငှက် နှင့် တဇင်တူ တံဆပ်(၄)ခုကို တွေ့နိုင်သည်။ ဗိမာန်အဝင်ဝတွင် ဦးသန့် ဗိမာန် U THANT MAUSOLIUM စာလုံးကြီးက ပန်းကနုတ်စီထားသော တံခါးအပေါ်တွင် ရေးသားထားပြီး ကြိုဆိုနေပါသည်။ အခန်းတွင်း အလယ်ခေါင်တွင် ဦးသန့်အုတ်ဂူရှိပြီး ဘယ်ဘက်တွင် ဦးသန့် ၁၉၀၉ - ၁၉၇၄ အနက်ခံ အပြာရောင်စာလုံးဖြင့် ဦးသန့်ဓါတ်ပုံပိုစတာကြီးကို တွေ့ရသည်။ ပိုစတာအောက်တွင် ဦးသန့်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို လူတရပ်အမြင့်ကျောက်စာပုံစံ မြန်မာဘာသာဖြင့် စာကြောင်း ၅၀ဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်း ရေးသားထားသင့်ပါသည်။ ဘေးနှစ်ဘက်တွင် ဓါတ်ပုံများဖြင့် ဦးသန့်အကြောင်း၊ ဖြစ်ရပ်များရေးသားထားသည့် ပိုစတာများစွာ ခင်းကျင်းပြထားပါသည်။ ထိုထက်ပိုသော ဗွီဒီယို၊ အသံများဖြင့် ခေတ်နှင့်အညီ ပြသသင့်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း မြန်မာလူမျိုး ငြိမ်းချမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်း အမှတ်တရအုတ်ဂူသည် ရိုးစင်းလှပါသည်။ လာရောက်ကြည့်ရှုသူ နည်းပါးလှသည်။ အနီးနားရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကိုသာ လူများပြည့်ညှတ်နေအောင် လာရောက်ဘုရားဖူးကြသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အခြေခံပညာကျောင်းသားများ ကျောင်းအစီအစဉ်ဖြင့် လာရောက်လေ့လာသင့် အတုယူသင့်သော ယခုအချိန်ထိ တစ်ဦးတည်းသော ကမ္ဘာထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဦးသန့်အုတ်ဂူ ဘယ်ဘက်တွင် ဘုရားပုံသဏ္ဍန်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဆုံးဘုရင် သီပေါမင်း၏ မိဘုရား စုဖုရားလတ် အုတ်ဂူရှိသည်။ ဘယ်ဘက်ကပ်ရက်တွင် မြန်မာလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် အုတ်ဂူရှိပါသည်။ ထိုနေရာမှ အောက်သို့ အုတ်လှေခါး ၅ထစ်ခန့်ဆင်းသွားပါက မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းအုတ်ဂူရှိသည်။ အထဲတွင်လည်း အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ၊ ပိုစတာများ ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။
ဦးသန့်သည် ကမ္ဘာသိ မြန်မာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှသော တနည်းအားဖြင့် ၈၀% လူဦးရေသည် ဆင်းရဲမွဲတေသော လယ်သမား၊ ကျေးလက်လူတန်းစားများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဆင်းရဲမွဲတေသူများ၏ ဘဝမြှင့်တင်ရေးအတွက် တခုတည်းသောထွက်ပေါက်မှာ စီးပွားရေးလဲမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးလဲမဟုတ်၊ ကျန်းမာရေးလဲမဟုတ်ပါ။ ပညာရေးဖြင့်သာ ဆင်းရဲမွဲတေ လူရာမဝင်သည့်ဘဝမှ ရုန်းထွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်တွင် လူမဲများမှာ ဆင်းရဲမွဲတေလှပါသည်။ လူအနှိမ်ခံရဆုံးလည်းဖြစ်သည်။ ထိုလူတန်းစားထဲမှ ကြီးပြင်းလာသူများအဖို့ အားကစား၊ အနုပညာရှင်များစွာရှိသော်လည်း လူဖြူများနှင့် တန်းတူမသတ်မှတ်ခံရပါ။ ငွေချမ်းသာသော်လည်း လူရာသွင်းမခံရပါ။ ထိုလူမည်းများအနိုမ်ခံဘဝမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တစ်နည်းသာရှိသည်။ ပညာရေးတွင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်အောင် ကြိုးစားရန်သာရှိသည်။ ထိုအချက်ကို နားလည်သော လူမဲစံပြပုဂ္ဂိုလ်များစွာ အမေရိကန်သမိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ မာတင်လူသာကင်း (လူမည်းအခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်)၊ မစ္စရိုက်စ် (လူမည်း အမျိုးသမီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး) နှင့် နောက်ဆုံး အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာသော အိုဘားမား တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အခြေခံ ဆင်းရဲမွဲတေသော လယ်သမားမျိုးရိုးမှ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်သည်လဲ စံပြဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်း ငပုတောမြို့နယ်မှ ပုသိမ်မြို့သို့ ၁၀တန်းပညာ အထူးကြိုးစားသင်ရင်း၊ ဗိုလ်သင်တန်းရွေးချယ်ခံရပြီး နိုင်ငံအကြီးအကဲဘဝ ရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အလားတူ ဦးသန့် သည် ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနောမြို့နယ်မှ ပညာအထူးကြိုးစားသင်ယူရင်း ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဖြစ်လာသည်။
ဦးသန့်ကို မသိသော လူငယ်မျိုးဆက်များစွာ ရှိသည်။ ဦးသန့် ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့သလဲ ဆိုသည်ကို လေ့လာအတုယူပြီး အနာဂါတ် ကမ္ဘာကျော်တတ်သိပညာရှင်များစွာ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် မြန်မာများကသာ လုပ်ရပါမည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီ3း နှင့် ကုလသမဂ္ဂလက်ရှိအကြီးကဲ ဘန်ကီမွန် စသည်တို့ လာရောက်ဂါရဝပြုကြသည်။ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်များကလည် လူအာ(အချိန်) နှင့် ငွေအား(အလှုဒါန်း) ပြုရပါမည်။ ကမ္ဘာ့အသင်းဖွဲ့များကလည်း ပါဝင်ကူညီလာမည်။ ကျေးလက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှ လွတ်ကင်းရန် ပညာရေးတိုးတက်လာပါမည်။
မြန်မာ့ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ ဆရာအရည်သွေးဦးစွာမြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာအရည်သွေးမြှင့်တင်နည်းများစွာအနက် ဆရာများစာဖတ်ခြင်းသည် အဓိကဖြစ်သည်။ ကျေးလက်တောရွာနှင့်၊ မြို့များမှ အထက်တန်းကျောင်းများကို စာကြည့်တိုက်များ (တနည်းအားဖြင့် ကျောင်းဆရာအရည်သွေးမြှင့်တင်ရေး စာအုပ်များ) မတည်ပေးဖို့လိုကြောင်း စဉ်းစားနေမိပါသည်။
1. Yangon Heritage Thrust
2. Dr. Than Myint U (Ph.D History)
3. Photo: Visit by French Foreign Minister to U Than House, 19-June-2016
* Organizers (this Facebook Group)
* Need to invite interested person from Singapore, Japan, USA ..
* Comments are welcom.
* Share this post to your love one or other groups.
Reference FB linke